Iindaba-Indlela yoLondolozo lweeFuucet Ukuvuza
Emva kwexesha elide lokusetyenziswa, i itephu yamanzi iya kuba neengxaki ezahlukeneyo, kwaye ukuvuza kwamanzi yenye yazo. Ukonga umbane kunye nokukhuselwa kwendalo ngoku kuyakhuthazwa, ke xa ithumbu liphuma, kufuneka lilungiswe ngexesha okanye endaweni yalo kufakwe elitsha itephu yamanziUkuvuza kwamanzi ngeFaucet yinto eqhelekileyo. Ezinye iingxaki ezincinci zinokulungiswa nguwe. Ukuba ubiza ingcali, ngamanye amaxesha awukwazi ukujongana nabo ngexesha. Zithini izizathu eziqhelekileyo zokuvuza kwemipu? Yeyiphi indlela yolondolozo enefomathi evuzayo?
Ngokubanzi, itompu inesakhiwo samanzi ashushu nabandayo, ke kukho iindawo zokungena ezimbini zamanzi. Phezulu kompompo, kukho imiqondiso eluhlaza okwesibhakabhaka nobomvu. Uphawu oluhlaza okwesibhakabhaka lumele indawo yokuphuma yamanzi abandayo, kwaye ebomvu imele amanzi ashushu. Amanzi aphuma kubushushu obahlukeneyo ngokujika macala ahlukeneyo. Lo ngumgaqo ofanayo nokusebenza kwesuti yeshawari kwigumbi lokuhlambela, Isakhiwo esibalulekileyo setephu sinesiphatho sayo, esinokusetyenziselwa ukusebenzisa itompu ukujikeleza ngokukhululekileyo. Isigqubuthelo esiphezulu sisetyenziselwa ukulungisa ubume betephu. Imodeli yentsimbi esembindini igutyungelwe ngomsesane wesikhumba ngaphakathi, kwaye ezantsi ziindawo ezimbini zokungenisa amanzi ukuqinisekisa ukusetyenziswa kombhobho.
1. Impompo ayivalwanga ngokuqinileyoUkuba impompo ayivalwanga ngokuqinileyo, isenokuba ngenxa yokuba igasket ngaphakathi kwimpompo yonakele. Kukho iiplastikhi zeplastiki kwitepu, kwaye umgangatho wee gaskets kwiimpawu ezahlukeneyo ukwahluka kakhulu, kodwa kule meko, buyisela iigaskethi endaweni yazo!
2. Iseepage yamanzi engqonge umphini wevalufa yetephu
Ukuba kukho amanzi amdaka ajikeleze isiseko sevalufa sompompo, kunokubangelwa ngamandla agqithisileyo xa ujija itephu ngamaxesha aqhelekileyo, kukhokelela ekukhululekeni okanye ekwahlukaneni nendawo efakiweyo. Susa nje kwaye ufake kwakhona itepu kwaye uyiqinise. Ukuba kukho amanzi amaninzi kakhulu asepepini, kufuneka atywinwe ngeglu yeglu.
3. Umsantsa obanjelwe empompini uyavuza
Ukuba itephu inephepha lamanzi kunye neengxaki zokuvuza, kusenokwenzeka ukuba igasket ineengxaki. Ngeli xesha, susa nje itepu ukubona ukuba i-gasket iyawa na okanye yaphukile, ukuba nje iyalungiswa kwaye itshintshwe ngexesha!
4. Iseepage yamanzi kwindibaniselwano yombhobho
Ukuba kukho i-seepage yamanzi kwindibaniselwano yombhobho, ngokusisiseko kukuba i-faucet nut ikhululekile okanye irusi ngenxa yexesha elide lenkonzo. Thenga entsha okanye ubeke i-gasket eyongezelelweyo ukuthintela ukopha kwamanzi.
Zimbini iingongoma zokunikela ingqalelo xa itephu iphuma. Okokuqala, xa umbhobho uvuza, isango eliphambili kufuneka livaliwe ukunqanda “ukukhukula” ekhaya. Okwesibini, izixhobo zokugcina kufuneka zilungisiwe, kwaye iinxalenye ezisusiweyo kufuneka zibekwe ngendlela enocwangco, ukuze zingabinakufakwa.
Kubomi bemihla ngemihla, kufuneka sisebenzise itompu ngokufanelekileyo. Asinakuqinisa umbane ngalo lonke ixesha. Kuya kufuneka siphuhlise umkhwa wokusebenzisa kakuhle kwaye siyigcine ikwimeko yendalo. Kungale ndlela kuphela esinokuthi sithintele ngokufanelekileyo ukuba itompu ingavuzi.
Ixesha Post: May-12-2021